>Let’s support and help NLD party to free Aung San Suu Kyi and all political prisoners from Burma – Burmese Senior Artists in exile requested
> ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အရေး အင်န်အယ်ဒီပါတီကို ပြည်သူတို့ ၀န်းရံထောက်ခံကြရန် ပြည်ပရောက် စာပေ အနုပညာရှင်တို့က ဆန္ဒပြု မိုးမခ မေ ၁၉၊ ၂၀၀၉ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အနီးကပ်မိတ်ဆွေများကို အကျယ်ချုပ် ဖောက်ဖျက်မှုဖြင့် စစ်အစိုးရက တရားစွဲဆိုပြီး အရေးယူရန် ပြင်ဆင်နေခြင်းကို တရား ဥပဒေနှင့် အညီ ပြန်လည် ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်နေသော မြန်မာပြည်၏ အတိုက်အခံ ပါတီ – အင်န်အယ်ဒီ၏ လက်ရှိ လှုပ်ရှားမှုများကို မိမိတို့က ကောင်းမွန်သော မျှော်လင့်ချက်တို့ဖြင့် ယုံကြည်မှု အပြည့် ရှိပါကြောင်း တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးနှင့် တပ်မတော်ဖခင်ကြီး၏ သမီး၊ မြန်မာပြည် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီရေး ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တကွသော ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခံထားရသူများ၊ မိသားစုများ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် အစွမ်းကုန်...
>Cartoon Maung Yit – Burmese vs Burmese Regime, the equation yet to be solved
> Cartoon Maung Yit – Burmese vs Burmese Regime, the equation yet to be solved May 18, 2009 No tags for this post. Related posts No related posts.
>Daw Suu Trial Updates
> အာဏာပိုင်တို့က အင်းစိန်ထောင်သို့ ချည်းကပ်ရာလမ်းများကို ပိတ်ဆို့ဝင်းမြတ်မေ ၁၈၊ ၂ဝဝ၉ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အင်းစိန်ထောင်တွင်းရှိ တရားရုံးတွင် စစ်တင် စစ်ဆေးသည့် ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် လက်နက်ကိုင် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များက အင်းစိန်ထောင်သို့ ချည်းကပ်ရာလမ်းများကို ပိတ်ဆို့ ထားကြသည်။ အင်းစိန်မီးသတ်ရှေ့မှ ပေါက်တောဝ မီးပွို့င်အထိ မည်သည့်ကားမှ ဝင်ထွက်၍ မရအောင် သံဆူးကြိုး အကာအရံများ ချထားပြီး လက်နက်ကိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ စောင့်ကြပ်ထားသည်။ အနီးရှိ ရပ်ကွက်များ အတွင်းရှိ လမ်းကြားများ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းများ အနီးတွင်လည်း ရဲများက လက်နက်ကိုင်စောင့်ကြပ်နေကြသည်။ အင်းစိန် ပိန္နဲကုန်း ရပ်ကွက်ရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းအနီး ရဲကားကြီး သုံးစီး ရှိနေသည်။ ဒေါ်စုအား တရားစွဲဆိုမှုကို အများက မကျေနပ်သဖြင့်...
> Cartoon Beruma – Judgment Day of Burma May 18th , 2009 No tags for this post. Related posts No related posts.
>Security Tightened around Insein Prison
> အင်းစိန်ထောင် ပတ်ဝန်းကျင် လုံခြုံရေးတင်းကြပ်ထား မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃ မေ ၁၈၊ ၂၀၀၉ ရန်ကုန်မြို့၊ အင်းစိန်ထောင်တွင် ချုပ်နှောင်ထားသည့် အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ရုံးထုတ်တရားစီရင်မည့်နေ့ဖြစ်ရာ ထိုဒေသအနီးတ၀ိုက်တွင် လက်နက်ကိုင်များ ချထားပြီး လမ်းများကိုလည်း ပိတ်ဆို့ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ “အင်းစိန် ဂုံးကျော်တံတားကို ပိတ်လိုက်တယ်။ သံဆူးကြိုးတွေ ချထားပြီး စစ်သားတွေက စောင့်နေတယ်။ အင်းစိန် လမ်းသစ်ဖက်မှာ စစ်ကား ၁၀ စီးကျော်၊ စစ်သားအပြည့် လက်နက်တွေနဲ့ စောင့်နေကြတယ်” ဟု မျက်မြင်တဦးက ဆိုသည်။ အင်းစိန်နှင့် အနီးတ၀ိုက်က ရပ်ကွက်တခုလျင် စွမ်းအားရှင် ၂ ဦးနှုံး ဆင့်ဆိုထားပြီး အင်းစိန်ထောင် ၀န်းကျင်လုံခြုံရေးအတွက် အရပ်ဝတ်နှင့် ချထားသည်ဟုလည်း ရပ်ကွက်တွင်းသတင်းများကတဆင့် သိရှိရသည်။ (ဓာတ်ပုံ...
>May 17th, 2009 – MoeMaKa Radio
> မေ ၁၇၊ ၂၀၀၉ – မိုးမခ ရေဒီယို ပန်းပန်လျက်ပါ၊ အလင်းရှင် ကဗျာ – ကြည်ကြည်ဌေး၊ အိမ်သီ(သာယာဝတီ)၊ မိုးမခ သတင်းတိုထွာ၊ သီချင်းပဒေသာ ဒေါ်စုအရေး – ဖိုးသံလူထု အတွေး ဂျောက်ဂျက်သတင်းနဲ့ ဂျောက်ဂျက်သီချင်း ရက်စက်ပါပေ့ကွယ် – သတင်းများ စုစည်းချက် ပီနန်ဆရာတော်နဲ့ စကားလက်ဆုံ – ဦးပန်တျာ နှစ်ပတ်လည်နာဂစ် ဆင်းရဲတွင်းနစ် – ခေတ်ပြိုင်အာဘော် ကျနော် သူခိုး – ဟာဒယရွှင်ဆေး – မော့၊ မိုးဒီ၊ စိန်ရိုး အထူးကဏ္ဍ ၁ – တပတ်အတွင်း ဒေါ်စုသတင်း၊ သုံးသပ်ချက်များ၊ သဘောအမြင်များ၊ အင်တာဗျူးများ အထူးကဏ္ဍ ၂ – သီပေါမင်း...
>ABurmese on the street – Are you ready yet ?
> သင်တို့ အဆင်သင့် ဖြစ်ကြပြီလား … လမ်းပေါ်က မြန်မာပြည်သား မေ ၁၇၊ ၂၀၀၉ အခုတလော တိုက်ပွဲခေါ်သံတွေကြားနေရပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံသား ယက်ထော တစ်ယောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အိမ်ထဲ ကို ရေကူးသွားတဲ့ ကိစ္စ ကစလို့၊ နအဖအစိုးရက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်လာပြီး၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ တိုက်ပွဲခေါ်သံတွေကြားနေရပါတယ်။ လူစုစုတွေ့ရင် ပစ်ခတ်တတ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံစစ်အစိုးရလက်အောက်မှာနေရတဲ့ သူတွေအတွက်တော့ ဆန္ဒပြတယ် ဆိုတာ အသက်နဲ့ မိသားစုကို ရင်းပြီးလုပ်ရတဲ့ အလုပ်တစ်ခုပါ။ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ ၁၉၆၂ ခု စစ်အာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကစလို့ ကြီးမားသော ဆန္ဒပြပွဲပေါင်း ၁၀ ခု ထက်မနည်း ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ အသက်ပေါင်း သောင်း ချီပြီး ဆုံရှုံးခဲ့ရပါပြီ။ နောက်ထပ်လဲ အသက်ပေါင်း...
>Burmese in Fort Wayne in solidarity with DASSK
> ဖို့ဝိန်းမြို့က မြန်မာများ မြို့တော်တရားရုံးရှေ့မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် စုရုံးကြ မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂၊ ဓာတ်ပုံ ခင်မောင်လေး(ဖို့ဝိန်း) မေ ၁၇၊ ၂၀၀၉ မြန်မာပြည်က ပြောင်းရွှေ့အခြေချလာကြသူ မြန်မာတိုင်းရင်းသားများ၊ ထောင်ပေါင်းများစွာ စုဝေးနေထိုင်သည့် အင်ဒီးယာနာပြည်နယ်၊ ဖို့ဝိန်းမြို့တွင် မြန်မာမိသားစုများ စုဝေးကြပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မတရားဖမ်းဆီး တရားစွဲဆိုခံထားရခြင်းကို ကန့်ကွက်သောအားဖြင့် မြို့၏ တရားရုံးတော်ရှေ့တွင် စုဝေးကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထိုဒေသတွင် နေထိုင်သူ မြန်မာဂီတပညာရှင် ဒေါ်မာမာအေးလည်း ထိုစုဝေးပွဲသို့ တက်ရောက်သည်။ No tags for this post. Related posts No related posts.
>Cartoon Beruma is Back – Let’s unite to free from fear
> ကာတွန်း ဘိရုမာ – ကြောက်ရွံ့ခြင်း ဆင်းရဲက လွတ်မြောက်ဖို့ … ငါတို့အားလုံး ညီညွတ်စို့ မေ ၁၇၊ ၂၀၀၉ No tags for this post. Related posts No related posts.
>Suu Kyi will deny having visitor wasacrime
> အပြစ်မရှိကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လျှောက်လဲမည်Reuters သတင်းဌာနမေ ၁၇၊ ၂၀၀၉ ဘန်ကောက်မြို့ မြန်မာသံရုံးရှေ့တွင် ယနေ့ တွေ့ရသော ဆန္ဒပြသူများက မြန်မာစစ်သားများ နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဲ့သို့ သရုပ်ဆောင်ထားကြသည်။ (ဓာတ်ပုံ – getty images) မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်လျက် ရှိပြီး မနက်ဖြန်တွင် အမှု ရင်ဆင်ရန် အသင့်ဖြစ်နေကြောင်း သူ၏ ရှေ့နေက ပြောသည်။ ရှေ့နေ ဦးကြည်ဝင်းသည် အင်းစိန်ထောင် “ဧည့်ရိပ်သာ”တွင် ဒေါ်စုကို ယမန်နေ့က တွေ့ခွင့် ရလိုက်သည်။ “သူ ကျန်းကျန်းမာမာ ရှိနေတယ် “ဆိုတာကို မိတ်ဆွေတွေကို ပြီးတော့ အားလုံးကို ပြောပေးပါ လို့ ဒေါ်စုက ပြောခိုင်းလိုက်ပါတယ်” ဟု...
>Khaing Mar Kyaw Zaw – Letter fromacommoner
> လေးအိမ်တန်းက ဒေါ်လေးစာ ခိုင်မာကျော်ဇော မေ ၁၇၊ ၂၀၀၉ စိတ်ဆင်းရဲလိုက်များ ပြောတောင် မပြောချင်တော့ပါဘူး။ ‘ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်’ ‘အောင်ဆန်းစုကြည်’ကို ‘အင်းစိန်ထောင်’ကို ပို့လိုက်ပြီတဲ့။ ရပ်ထဲ ရွာထဲလည်း ဒီအကြောင်းပဲ ပြောနေကြတယ်။ အိမ်ထဲမှာတင် ကြိတ်ကြိတ်နဲ့ တိုးတိုးတိတ်တိတ် ပြောနေကြတာ မဟုတ်ဘူး။ လယ်ထဲဆင်းလည်း ဒီအကြောင်း ရေခပ်ဆင်းလည်း ဒီအကြောင်း ငါးရှာထွက်လည်း ဒီအကြောင်း ဟင်းရွက်ခူးလည်း ဒီအကြောင်း ရွာဦးဘုန်းကျောင်းထဲလည်း ဒီအကြောင်း မြို့တက် ဈေးဝယ်ထွက်တော့လည်း အကြောင်း ၅ နှစ်အရွယ် ကျုပ်မြေးလေးတောင် ‘အောင်ဆန်းစုကြည်’ အကြောင်းကို စိတ်ဝင်တစား မေးတယ် ဆိုတော့ သူတို့ ကျောင်းထဲလည်း ဒီအကြောင်းပဲ ပြောနေကြလို့ နေမှာပေါ့။ ကျုပ်ကို မြေးက မေးတယ်။ “လူတွေချစ်တဲ့ ဒေါ်စုကို...
>Regime frees Daw Suu’s doctor
> ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဆရာဝန် ပြန်လည်လွတ်မြောက်AFP သတင်းဌာနမေ ၁၇၊ ၂၀၀၉ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဆရာဝန် ယမန်နေ့ညက ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာပြီ ဖြစ်ကြောင်း မိသားစုက ပြောသည်။ ပြန်လွတ်လာသူ ဆရာဝန်သည် အမေရိကန်တဦး ဒေါ်စု၏ ခြံဝင်း အတွင်း ရေကူးပြီး လျှို့ဝှက် သွားရောက် ခဲ့သည့် အမှုဖြင့် လွန်ခဲ့သည့် ၁၀ ရက်ခန့်က ဖမ်းဆီး ခံရသူ ဖြစ်သည်။ “ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်း ပြန်လွတ်လာပါပြီ၊ ည ၇ နာရီလောက်မှာ ပြန်လွတ်လာပါတယ်။ သူ့အပြောအရ သူ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ပါတယ်” ဟု သူ၏ မိသားစုဝင်တဦးက AFP သတင်းဌာနကို ပြောသည်။ ဒေါ်စု၏ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ဖြစ်သော အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ...
>Cartoon Maung Yit – We won’t be coming home, this time
> ကာတွန်းမောင်ရစ် – ဒီတခါတော့ – အိမ်ပြန်မလာတော့ဘူး၊ သားနဲ့ သမီး … မေ ၁၇၊ ၂၀၀၉ No tags for this post. Related posts No related posts.
Page 812 of 897«1...810811812813814...897»
ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ ရဲဘော်ကြင်မောင် (ခ) ရဲဘော်ထွန်း (၉၂နှစ်) ကွယ်လွန်
>Kyaw Thu – U Ko Ko passed away
>MoeMaKa Reporter 003 - Burmese Political Situation in Question
ကာတွန်း ကိုခေတ် - သဘောထားအမှန်မှာ ...
>Kyaw Thu Moe Myint - Personal Whiteboard - Poem
>Suu &amp; Aung Kyi - joint press conference
>Maung Lu Htwe - New Currency 1 Miilion Notes
ထက်ခေါင်လင်း၊ အိချယ်ရီအောင် - အစိုးရသစ်နဲ့ ပျက်စီးနေတဲ့တက္ကသိုလ်ပညာရေး